खाडीमा रहेका प्यारो दाइलाई चिठी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मेरो प्यारो दाई । खोई त ? यसपालीको रक्षाबन्धनमा मेरो लागि gift नै आएन । एकदम चित्त दुख्यो । अनि कति रिस पनि उठिरा छ । रिस उम्लिएर भुइमा पोखिने बेला भइसक्यो ।सधै चित्त बुझा न ,बुने, भनेर कै हुनेबाला छैन ।कसरी बुझाउने चित्त । संगै हुदा त सधै झगडा गर्नु पर्दथ्यो ।अव त झगडा गर्न नपाको पनि कति भैक्यो ।साच्चि दाई यो चिठी तपाइकै लागि ।फेरी कसरी भनु । आफनो स्वार्थका लागि हजुरलाई बोलाउन पनि त सक्दिन । घर अनि गरिवीले गर्दा हजुरलाई खाडी मुलुकमा नै लखेटयो ।जव म सानी थिए आमा भन्नुहून्थयो ,हामी गरिव छौ नानी ।
गरिवीलाई बुझ । घाटीहेरेर हाड निल्ने हो । जव म यौटा घडीको लागि चिच्याउदै थिए । अनि हजुरले नै भन्नुभएको होइन ? नआत्ति काली तेरा सवै इच्क्षाहरु पुरा हुनेछन । यही भनेको याद छ मलाई जव तपाई साउदी अरेवियाको लागि उडनु भयो । सोचेकी थिए यो उडाई केवल छोटो अवधिका लागि हो ।तर खै त आठबर्ष पुरा भैसक्यो दाइ ।
हजुरलाई मेरो माया लाग्दैन र ? ठीक छ मेरो त माया लागेन ।अनि आमा बाबाको नि ? समयले हजुरलाई निर्दयी बनायो कि ?गरिवीले ?म बुझनै सक्दिन ।अबुझ छु ।सधै जसरी यसपाली पनि आयो रक्षाबन्धन ।मलाई के मतलव आइराखोस । हजुरले नै माया माया मारेपछि के को रक्षाबन्धन । के का लागि वास्ता गर्नु ? बाबा आमा कसरी मन बुझाउनुहून्छ होला । यौटा छोरो त्यो पनि त्यो पनि हरायो उतै खाडी मुलुकतिर । मान्छेको भन्दा बढी माया पैसाको कहां हून्छ र ? त्यो पनि भाको यौटा छोरा अनि मेरो एउटै दाइ । संगै बस्दा कहिलै यति धेरै माया लागेन त हजुरको ।
सायद त्यो माया दिनदिनैको fight लुकेको थियो होला ।अनि म सधै हारे पनिlast मा winner हुन्थे । रोएर कराएर जितेरै भइपनि ।सधै रक्षाबन्धनमा gift संगै एउटा चकलेट हून्थ्यो मेरा लागि । खोइ त अव त केही छैन । अव त चकलेट पनि चाहिदैन मलाई हजुरको उपस्थिति भए पुग्छ ।अं तर झगडा गर्न भने मन छ । हजुर संगै कराउन मन छ ।किनकि मेरा लुकेका खुशी त्यै झगडामा थिए ।सिंगो परिवारको साथमा थियो ।हजुर विना त पुरै घर सुनो लाग्छ ।खिन्न लाग्छ । अनि भयो अव पैसा पुग्यो अनि दुख पनि ।बाकीको मेहनत आफनै देशका लागि बचाएर राख्नु ।जति पसिना त्यहा बगाउनुहुन्छ त्यो भन्दा त्यो भन्दा बढी त्यसले यहां खोला बग्छ ।जत्ति दुख त्यहां गर्नुभाछ त्यो भन्दा कमै दुखले यहा धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
आखिरी जान जबरजस्ति पनि थिएन नि ।हजुर जस्तो युवाको खाचो त देशलाई छ ,बाहिरलाई होइन । पैसा त आज छ भोली छैन ।तर एक पटक आफनालाई फर्केर हेर्नूहोस दाइ ।अनन्त साथ र उज्वल भविस्य यही छ । र्फकेर आउनुहोस दाई म हजुरको प्रतिक्ष्ााँमा छु । आमा बाबालाई हजुरको खाचो छ र यो देशले युवाशक्तिलाई पर्खिराखेको छ ।
मेरो दाइजस्तै आगिन्ति दाइहरु आज बिदेशका छन ।यो पत्र मात्र मेरो दाईलाई होइन ति सबै युवा दाईहरुका लागि समर्पित छ । तपाईहरु जस्ता युवाहरुको काधमा यो देशको भविस्य लुकेको छ । किनकि युवाबिना यो देश अपुर्ण र अध्यारो छ । आजका युवा भोलीका कर्णधार । दाई बैनीहरुको रक्षाबन्धन सुनो नबनाईदिनुहोस ।सवै बिदेशमा बस्ने मेरा नेपाली दाइहरुमा रक्षाबन्धनको हार्दिक शुभकामना ।
उही हजुरकी प्यारी बहिनी